Abantu abangama-57% Abakuncomi Ngoba ... | Martech Zone
Abantu abangama-57% abayincomi inkampani yakho ngoba une- iwebhusayithi elungiselelwe kahle. Lokho kubuhlungu… futhi siyazi Martech Zone ungomunye wabo! Ngenkathi sinohlelo lokusebenza lweselula olumnandi, siyazi ukuthi IJetpack ejwayelekile yeselula kubokubuhlungu ukubuka indawo yethu.
Njengoba siqhubeka nokusebenza namakhasimende ethu futhi siwabuyekeza analytics, sekuya ngokusobala kithi ukuthi amaklayenti ethu angenzelwanga umakhalekhukhwini entula ngempela kwinani nekhwalithi yokuvakashelwa abakubonayo kubasebenzisi beselula. Abanye, njengaleli sayithi, banetimu eqondene neselula futhi asiboni imiphumela emihle njengamaklayenti ethu anamasayithi aphendulayo. Kwenziwe thina makholwa… kangangoba sisebenza nabakhulu iqembu lokuklama nentuthuko e-Exit 31 ekwakheni itimu entsha ngokuphelele ephendulayo.
Okuningi kungenzeka ukuthi ufunda lokhu kwi-smartphone noma kuthebhulethi kunakwilaptop noma kudeskithophu (okungenani ngokusho kwezibalo). Ngaphandle kokukhuphuka okusheshayo okumangazayo kweselula - okubonakala kungubusuku obubodwa - akunzima ukukuqonda. Siphila ezweni lapho sidinga khona i-Intanethi ezandleni zethu, futhi ama-Smartphones namaphilisi manje sebekwazi ukuletha ulwazi olungaguquguquki (futhi olusebenza kahle) lwedijithali kunama-laptops anzima namadeskithophu.
Le infographic evela ku-WSI inazo zonke izibalo ozidingayo ukufakazela ukudlulela kokuhlangenwe nakho komsebenzisi okulungiselelwe ngeselula:
Umsebenzisi We-Inthanethi Kuphelas - 23% wase-United States angamaselula kuphela. Lokho kusho ukuthi abasebenzisi ngisho nedeskithophu ukusesha nokuthola imininingwane online.
Ukusesha Kwamaselula - Ukusesha okungu-1 koku-4 kwenziwa kuselula.
Ukusetshenziswa Kwamaselula - Abantu abangama-98% basebenzisa amaselula ekhaya, ama-89% ekuhambeni, ama-79% ngenkathi bethenga, ama-74% emsebenzini no-64% kwezokuthutha zomphakathi.
Akumangalisi ukuthi ngo-2015, izindleko ezilindelwe ku- ukumaketha kwamaselula kuzofinyelela ku- $ 400 billion e-United States kuphela!
Tags: androidphuma 31iphonenokwenza kahle kweselulausesho lweselulaiwebhusayithi yeselulaukusetshenziswa kweselula kuphelaisayithi eliphendulayoukusebenzisa ngokugcwele injinismartphonetabletisetshenziswa nini iselulawindows mobilewsi